प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन तत्कालीन माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरुद्वारा ‘बहिष्कार’! — Motivatenews.Com
प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन तत्कालीन माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरुद्वारा ‘बहिष्कार’!
बैशाख ३, काठमाडौं–नयाँ वर्ष २०७६ को शुभकामनासहित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशबासीका नाममा गरेको सम्बोधनका बेला मन्त्रिपरिषदका प्रभावशाली मन्त्रीहरु नै उपस्थित भएनन् । प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार बिहान साढे ६ बजेभित्र बालुवाटारमा उपस्थित हुन सबै मन्त्रीलाई खबर गरे पनि तत्कालीन माओवादी केन्द्रका तर्फबाट मन्त्रिपरिषदमा सहभागी गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, उर्जामन्त्री वर्षमान पुन, वनमन्त्री शक्ति बस्नेत, उद्योगमन्त्री मातृका यादव, कृषिमन्त्री चन्द्रप्रकाश खनाल र खानेपानीमन्त्री बिना मगर सम्बोधनमा उपस्थित नभएको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।
काठमाडौंमै रहेर पनि गृहमन्त्री थापा, उर्जामन्त्री पुन उपस्थित भएनन भने अन्य मन्त्रीहरु भने काठमाडौं बाहिर कार्यक्रम तय गरेर सम्बोधन कार्यक्रम छलेका थिए । बालुवाटार स्रोतका अनुसार सबै मन्त्रीलाई बिहानै उपस्थित हुन आग्रह गरिएको थियो । बिहानै उपस्थित हुन गरिएको आग्रहमा केही मन्त्री बाहिर भएकाले नआए पनि काठमाडौं मै भएका मन्त्रीहरु किन नआएको भन्ने थाहा नभएको बालुवाटार स्रोतले बताएका छ ।
त्यस्तै ७ रोपनी १० आना फिर्ता शीर्षकको समाचारमा नेपाल राष्ट्रिय भूतपूर्व सैनिक संघ र व्यापारीको मिलेमतोमा हडप्न लागिएको एक अर्ब रुपैयाँ बढी मूल्य पर्ने जग्गा सरकारले फिर्ता ल्याएको छ । पछिल्लो समय सरकारी जग्गा भूमाफियाको चंगुलमा पर्ने गरेका छन् । मालपोतका कर्मचारीले सहयोग गर्दा भूमाफियाको रगरगी बढेको छ ।
त्यस्तै सिंहदरबारमा मन्त्रालयका अधिकांश ढोका बन्द शीर्षकको अर्को समाचारमा मन्त्रालय बजेट बनाउन जुटेका कारण मन्त्रालयका अधिकांश ढोका बन्द भएको समाचार पत्रिकाले छापेको छ।